YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 27
Burma Golf Club- Fort Wayne)-
အမေရိကန်နိုင်ငံ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖော့ဝိုင်းမြို့ မြန်မာဂေါက်သီးကလပ် ( Burma Golf Club- Fort Wayne) က ကြီးမှူးပြီး ပထမ အကြိမ်မြောက် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် မြန်မာဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကို Memorial Holidays ၂၀၀၉ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက် စနေနေ့တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ Indiana –Burma Open Golf Tournament သို့ မည်သည့် ဂေါက်သီးရိုက်ဝါသနာရှင်မဆို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး၊ မိမိတို့ အသိမိတ်ဆွေ ဂေါက်သီး ၀ါသနာရှင်များကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပြီး လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်း ကြားသိ ရပါသည်။ Green Fee, Free Golf carts, Free rang balls, snack foods, drinks အပါအ၀င် ညနေစာဖြင့် ဧည့်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၀င်ကြေး မှာ တယောက်လျှင် ၆၅ ဒေါ်လာ ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား၊တက္ကဆတ်၊ဖလော်ရီဒါ၊ အပါအ၀င် အမေရိကန်နိုင်ငံ တ၀န်းမှ မြန်မာဂေါက်သီး သမားများ လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကြိုတင်သိရှိရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် လိုသူများ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၁၄ ရက်နေ့ထက် နောက်မကျပဲ ၀င်ကြေး ကို ပို့ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တည်းခိုခန်းများအတွက် အကူအညီလိုအပ်ပါက လည်းကောင်း၊ ပြိုင်ပွဲ မတိုင်ခင် နှင့် ပြိုင်အပြီး နေ့များ၌ ဂေါက်သီးရိုက်လိုကြသော ဂေါက်သီးဝါသနာရှင်များအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်ကို သိရှိလိုပါလျှင် ဖော်ပြထားသော မြန်မာ ဂေါက်သီးကလပ် ( Burma Golf Club- Fort Wayne) ဖုန်းနံပါတ်များထံ ကြိုတင်ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
အမေရိကန်ရောက် မိမိတို့ မြန်မာအသိမိတ်ဆွေ ဂေါက်သီးဝါသနာရှင်များထံ လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းပေး ပေးကြပါ။ အမေရိကန် ပြည်နယ်များရှိ ဂေါက်သီးသမား အကျော်အမော်များကို အင်ဒီယားနားပြည် ဖော့ဝိုင်းမြို့ မြန်မာဂေါက်သီးကလပ်မှ တလေးတစား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Host: Burma Golf Club ( Fort Wayne)
Cherry Hill Golf Course6615 Wheelock Rd, Fort Wayne
Indiana, USA. When: Saturday, May 23, 11:30AM Phone: 260-615-0575
Send you check by: May 14th, 2009
Burma Golf Club ( Fort Wayne) ( 260-705-4181)
Burma Golf Club ( Fort Wayne) (260-415-4862)
Burma Golf Club ( Fort Wayne) (260-602-4205)
Burma Golf Club ( Fort Wayne) (260-444-8737)
We will provide the direction to Burma Golf Club House for awarding ceremony and dinner. Open to all golfers looking foragreat day of fun. Hope to see you all there.
ဘယ်ကဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်လဲဟေ့ငါတို့ မသိရပါလားကွာ ။
ကိုမြတ်စိုးကိုယ်ပွားmyat soe ကပြင်ဆင်ကြေငြာလိုက်တာက...
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဟုတ်လှပြီထင်တလုံးနဲ့ဘ၀ဟောင်းမေ့၊အောက်ခြေတွေလွတ်၊
အမိမြေမှာနေ့ တဓူဝအသက်သွေးတွေ ဘ၀တွေပေးဆပ်နေကြတဲ့
ရှက်တတ်တဲ့စိတ်ရှိရင်ဖြင့် ရှက်စိတ်နဲ့ သာကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်လို့ သာ
သေကြပါတော့လို့ ရပ်ဝေးတနေရာမှမေတ္တာပို့ လိုက်ပါသည်။
ကိုမိုးသီး နှင့် ကိုမြတ်စိုး
ခင်ဗျား တို့ ပြောတော့ ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဆို ဘယ့်နှယ့် ဖြစ်ကြတာလဲ ၊
ကြပ်အတည်း ပေါင်းစုံ လမ်းဆုံလမ်းဂွမှာ ငြင်းကြခုံကြ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေညှိကြနှိုင်းကြ
ခင်ဗျားတို့ က သောက်ရှက်မရှိ ဂေါက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ ရှစ်လေးလုံးမျက်နှာ ဓားနဲ့မွှန်း နေကြတာလား၊
ဂေါက်ရိုက်ကြမဲ့ကောင်တွေကြည့်တော့ . . .ကိုမြတ်စိုးက အလုပ်မရှိ အိမ်လခ ပေးစရာတောင်မရှိ ။
ကိုချစ်ကြည် ကလဲ သူ.ခလေးနှစ်ယောက်ကို ဟိုဂျောင်တိုး ဒီဂျောင်ထိုး နဲ့ကျွေးစရာတောင်မရှိ။
ကြည်ဌေးရဲ့မိန်းမ ခမျာများတော့ တို့ ဖူး န့ဲ အကျော် ကို တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် လိုက်ရောင်းပြီး မိသားစုဝမ်းရေး
ဖြေရှင်း နေရရှာတာ ဖို့ ဝင်းမှာလူတိုင်းအသိဘဲ အဲဒိ ဘ၀င်ရူး ကြည်ဌေး ကလဲ ဂေါက်ရျိက်သမားသဌေးလိုလို ဘာလိုလို သောက်ရှက်မရှိ။
အထဲပြန်ဝင် ဒူးထောက် သစ်စာဖေါက်သွားတဲ့ ရောင်နီ အကို ကိုငြိမ်းခြမ်းကြပြန်တော့
သူများဆီက ကြာကူရိုက်ပြီး လုယူထားတဲ့ သူ့ မိန်းမ သိန်ဂီကို အဖြူတွေနဲ့တရုန်းရုန်း လွတ်ပေးထားပြီး
သူကတော့ ဂေါက်ရိုက်လိုက် ဂွင်ရိုက်လိုက်နဲ့ရဖြူဂျီ တွေရဲ့မျက်ရည်တွေကိုငွေ လုပ် သုံးနေသူ။
ဟိုတနေ့ က ဖို့ ဝင်းမှာ သီးလေးသီးအငြိမ့် သွားကြည့်တော့ . . . .ဒီကောင်တွေ တယောက်မှလာမကြည့်ရဲကြဘူးတဲ့၊
Dr သီဟ ၊ ကိုကိုဦး၊ ကိုမောင်မောင်စိုး၊ ကိုကျော်သက် တို့ အုပ်စုကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့် ကျင်ရေး၊
စန်ရှင် ဆက်လက်အရေးယူဆောင် ရွက်ရေး နဲ့ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အင်အားစုများညီညွတ်ရေး အတွက် စီမီနာ တခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြကြောင်းကြားခဲ့ရသေးတယ်။
ဒီတော့ ကျနော်တို့ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အင်အားစု အားလုံးမှာ ဒီဖေါက်ပြန်ရေးသမားတွေ ကိုဝိုင်ဝန်းနိမ်နှင်းဘို့ တာဝန်ရှိ သလို . .
ဖို့ ဝင်း က ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု တွေမှာ လဲ ဒီဖေါက်ပြန်ရေး အုပ်စု နဲ့ဒင်းတို့ လုပ်ရပ်ကို နှိမ်နှင်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဖို့ ဝင်းက မိတ်ဆွေ တချိူ့ကိုဒီအကြောင်ဖုန်းဆက်မေးတော့. . သူတို့ ကဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောကြပါတယ် ။
ဆရာဦးတင်မိုးရေထကြည့် လှည်ပါဦး . . . .
တွေ့တော့ @$#$%%^ လုပ်တယ်။
ဒီမိုး ဒီမြေ ဒီလူတွေနဲ့
သူခိုးက လူ လူဟစ်
အရေးတော်ပုံ အောင်စေလော့။ ။
*တင်မိုး ရဲ့ ဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း နှင့် အခြားကဗျာများ" ပဌမနှိပ်ခြင်း၊ လမင်းတရာစာပေ၊၂၀၀၀။ မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။*
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/27/20093အကြံပြုခြင်း
ပေါလိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ /ပြည်သူများကို အင်တာနက်သုံးစွဲ ခွင့်မပေး ပြင်ဆင်ရန် ဟု အကြောင်းပြပြီး ၎င်း တို့ ကမူ စိတ်တိုင်းကျသုံးစွဲ နေ၍ အများစု က ထိုကိစ္စသည် အုံကြွမှုတစ် ခုဆီသို့ တွန်းပို့ နိုင်သည် ဟုခန့်မှန်း/စစ်ကားက ခရီးသည်တင်ကားကို တိုက် /တွံတေး ကျူရှင်ဆရာ ဆန္ဒပြပြန်ပြီ /ဒေါ်စု ပြန်လွတ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ /စစ်အစိုးရရဲ့ အပြောထက် လုပ်ရပ်ကို အတိုက်အခံတို့ မြင်လို /တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူ နီးစပ်ရေး မလွယ်ကူ/အိန္ဒိယ နှင့် တရုပ်ရေနံ ကုမ္ပဏီများ ရခိုင် ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်များကို အပြိုင်အဆိုင် လုယက် /(ထိုင်းcollect) ဖုန်းထောင်လုပ်စား သူများအဆင်မပြေဖြစ် / တော်လှန်ရေးနေ့ အတွက် လူထုတရပ်လုံးအတွက်စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့ မှ လှုပ်ရှားမှု။ မြောက်ကိုရီးယားဒုံးပျံကို ပစ်ချဖို့ ဂျပန်အမိန့်ထုတ် /
Publish at Scribd or explore others: media children
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/27/20090အကြံပြုခြင်း
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သားအပေါင်းတို့ရှင် -
ဒီကနေ့ဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် စော်ကားနှိပ်စက်၊ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခဲ့ကြတဲ့ ဖက်ဆစ် လူရမ်းကားတွေကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ဦးဆောင်ပြီး၊ ပြည်သူတရပ်လုံးက တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ (၆၄) နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ သမိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံး ခံစား၊ စံစားနိုင်ရေးအတွက် ရဲဘော်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေးဘီဘင် မြန်မာ့တပ်မတော်သားကြီးတွေဟာ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးကို စတေးပြီး မြန်မာ့လွတ် လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ခံစားခွင့် မရရှာကြသေးပါဘူး။
မြန်မာပြည်သူလူထုဟာ အာဏာရူးနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစုရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်၊ သတ်ဖြတ် နှိပ်စက်မှုတွေကို ခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စစ်အာဏာရှင်တစုဟာ ရဲဘော်တို့ရဲ့ ရိုးဖြောင့်တည်ကြည်မှု၊ သစ္စာစောင့်သိမှုတွေကို အသုံးချပြီး သူတို့အာဏာတည်မြဲဖို့၊ သူတို့သား သမီး၊ မြေးမြစ်တွေကောင်းစားဖို့ စီမံဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
ပြည်သူလူထုမှာတော့ ငတ်တလှည့်၊ ပြတ်တလှည့်နဲ့ ၀မ်းရေးအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရုန်းကန်ရှာဖွေနေကြရတာ ရဲဘော်တို့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါ။
ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ လူထုတရပ်လုံး လွတ်လပ်ရေးအရသာကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားနိုင်ဖို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်ဟာ မပြီးမြောက်သေးဘူးလို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေ ပြည့်စုံပြီးမြောက်ဖို့အတွက် မြန်မာပြည်သူလူထုကို ဆင်းရဲတွင်းထဲ တွန်းပို့နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ပြည်သူ့တပ်မတော်သား ပီသစွာ တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ပေးဖို့ သမိုင်းဝင်နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့ ဒီကနေ့ မှာ မြန်မာပြည်သူတဦးအနေနဲ့ ရဲဘော်တို့အားလုံးကို ပန်ကြားတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်ဘ၀ရောက်အောင် တွန်းပို့နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တော်လှန် ပြီး ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကို ခိုလှုံလာမယ့် တပ်မတော်သားအပေါင်းကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ စောင့်ကြိုလိုပါကြောင်း အလေးအနက်ထား ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
သောကြာနေ့၊ မတ်လ 27 2009 16:57 - မြန်မာစံတော်ချိန်
သောကြာနေ့၊ မတ်လ 27 2009 19:56 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အန်အယ်ဒီ အထူးကြေညာချက် အမှတ် ၁၈ တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူပေးရန်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအသစ်ကို ပြန်သုံးသပ်ရေး ကော်မတီဖွဲ့ပေးရန်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်တို့ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုထားသည်။
ပုံ - မိုးမခ။
ထူးအိမ်သင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၄) နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အဖြစ် ကွယ်လွန်သူ "အဆိုတော် ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း" ကို သူ့ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေက သူ့ အမှတ်တရ တည်ဆောက် လွှင့်တင်ထားတဲ့ Htoo Eain Thin : Myanmar Famous Vocalist, Composer & Poetic [www.htooeainthin.com] ကွန်ရက် စာမျက်နှာနဲ့ မြန်မာ ဘလော့ ကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေကနေ ပြန်လည်စုစည်း လွှင့်တင် ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင် ဦးထွန်းမြင့်နှင့် မိခင် ဒေါ်မြရင်တို့မှ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ပုသိမ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အဖေ ဗမာ၊ အမေ မွန် ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း ၆ ယောက်အနက် သားအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည် သန်းထွန်းစိုးမှ ပြောင်းလဲခဲ့သော အမည်ရင်းမှာ ကျော်မြင့်လွင် ဖြစ်ပြီး၊ ကိုငွေသီးဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော 'ပေါ်စွမ်း' ဟူသည့် မွန်ဘာသာဖြင့် ငယ်နာမည်လည်း ရှိခဲ့သည်။ သျှပ်၊ ဘဲဥ၊ ငှက်ကြီးဟုလည်း ချစ်စနိုး ခေါ်ကြသည်။
မူလတန်း ပညာကို အမှတ် (၂ဝ) အ-မ-က တွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ပုသိမ် အ-ထ-က (၃) မှ အထက်တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ - ၈ဝ တွင် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ပုသိမ်‌ ဒေသ ကောလိပ်‌သို့ တက်‌ရောက်‌ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်‌တွင် မိသားစုနှင့်အတူ မော်‌လမြိုင်‌သို့ ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ပြီးနောက် မော်လမြိုင်‌ တက္ကသိုလ်‌မှ ရုက္ခဗေဒ အထူးပြုဖြင့် သိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
ဂီတနှင့် ပတ်သက်သော ငယ်ဆရာများမှာ ဦးကျောက်စိမ်းနှင့် ဦးစန်းတင့် (လမ်းစဉ်လူငယ် ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့၊ ပုသိမ်မြို့) ဖြစ်ပြီး၊ မော်လမြိုင်တွင် ဂီတဆရာ ဦးအောင်စိုး (KC Francis) ထံမှ ဂီတ သင်္ကေတနှင့် ဂီတပညာ သင်ယူခဲ့သည်။
၁၉၈၁ ဒေသ ကောလိပ် ကျောင်းသားဘဝတွင် 'မြ' အမည်ရှိ ကျောင်းတွင်း ကဗျာစာအုပ်ထဲ၌ ကလောင်အမည် သျှပ်မှူးကျော် ဖြင့် ကဗျာများ ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကဗျာဖြစ်သည့် 'အမေ … အမေ ဝမ်းရည်စပ်တယ် ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ သားရင်ထဲမှာ ကဗျာ' ဟူသော ကဗျာမှာ သူ့အား ကဗျာဆရာ အဖြစ် ထင်ရှား အမှတ်ရစေခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၂ တွင် ကလောင်အမည် လင်းထက်ဖြင့် 'မြတ်နိုးခြင်းအားဖြင့် ကြင်နာသည်ဖြစ်၍' ဝတ္ထုတိုကို ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်းတွင် စတင် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ လင်းထက် နာမည်ဖြင့်ပင် ကဗျာများလည်း ရေးခဲ့သည်။ သူ၏ အခြား ကလောင်အမည် တခုမှာ ရဲသင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထူးအိမ်သင် အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ပြီး ပုံနှိပ် ဖော်ပြခဲ့သည့် တပုဒ်တည်းသော ကဗျာမှာ 'သက်တန့်မြစ်' ဖြစ်ပြီး သရဖူ မဂ္ဂဇင်း (ဟောင်း) နှစ်ပတ်လည် အထူးထုတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည် ။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် 'နာရီပေါ်မှ မျက်ရည်စက်များ' တေးစီးရီးဖြင့် ဂီတလောကသို့ စတင် ဝင်‌ရောက်ခဲ့သည်။ ထူးအိမ်သင်သည် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်း အများစုကို ရေးသား သီကုံးခဲ့ပြီး ဂီတ ပညာရှင်တဦး ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး တေးစီးရီး 'နာရီပေါ်မှ မျက်ရည်စက်များ' စတင် သွင်းယူခဲ့ပြီးနောက် မှော်ဆရာအိပ်မက်၊ သက်ငြိမ်၊ အတ္တပုံဆောင်ခဲများ၊ အကြင်နာ အိပ်မက်၊ အရင်အတိုင်း၊ စကားလုံးမရှိတဲ့ ကောင်းကင်၊ ထူးအိမ်သင် (Unplugged Live) ၊ မြို့ပြလရောင် တမ်းခြင်း၊ အမေ (သို့မဟုတ်) မေတ္တာတော်ဘွဲ့၊ အစိမ်းရောင် ရက်စွဲများ၊ တနေ့စာ အလွဲများ၊ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တို့ တေးစီးရီးများ သွင်းပြီ ထုတ်ဝေ ဖြန်ချိခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံး လူထု အရေးတော်ပုံကြီးကို စစ်တပ်က သွေးထွက် သံယိုနှိမ်နင်းပြီး နိုင်ငံတော် အာဏာအရပ်ရပ်ကို သိမ်းယူပြီးနောက် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ အများအပြား နယ်စပ်ဒေသ အသီးသီးကို ထွက်ပြေးပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေကို လက်နက် တော်လှန်ဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ ထူးအိမ်သင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (မကဒတ)၊ ကျောင်းသား တပ်မတော်တို့ ဖွဲ့စည်းရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ကျောင်းသား တပ်မတော်၏ စစ်တေးသီချင်း တပုဒ် ဖြစ်တဲ့ "အရေးကြီးပြီ" သီချင်း ရေးဖွဲ့ပေးသည်။ နောက်ပိုင်းမှာ မိခင်ကို ချစ်မြတ်နိုး လွမ်းဆွတ်လှသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး သီချင်းခွေအတွက် Oasis တေးသံသွင်းတွင် အသံသွင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ၁၄ - ၈ - ၂ဝဝ၄ နံနက် ၁၁း၎ဝ နာရီတွင် ကွယ်လွန်ပြီး ဇနီး သွယ်သွယ်ထွေးနှင့် သမီး မိကွန်ထောတို့ ကျန်ရစ်သည်။
ထူးအိမ်သင် သီဆို ထုတ်ဝေခဲ့သော တေးသီချင်းခွေများ
စဉ် သီချင်းခွေ အမည် ထုတ်ဝေသည့် ခုနှစ် အသံဖမ်း တေးဂီတ ထုတ်လုပ်ရေး
၁ နာရီပေါ်က မျက်ရည်စက်များ ၁၉၈၇ Oasis The Aces ဂန္ဓမာ တေးသံသွင်း
၂ မှော်ဆရာအိပ်မက် ၁၉၈၈ (ဖေဖော်ဝါရီ) Oasis The Aces ပန်းနုလဝန်း တေးသံသွင်း
၃ သက်ငြိမ် ၁၉၈၉ (အောက်တိုဘာ) Oasis The Aces Country Boy Recording
၄ အတ္တပုံဆောင်ခဲများ ၁၉၉၁ (ဇန်နဝါရီ) Oasis Emperor စံပယ်ဦး တေးသံသွင်း
၅ အကြင်နာအိပ်မက် ၁၉၉၁ (ဇွန်) Oasis, May T Four, Emperor, Success ယင်းမာ တေးသံသွင်း
၆ အရင်အတိုင်း ၁၉၉၁ (ဒီဇင်ဘာ) Oasis Emperor ဂျူပီတာ တေးသံသွင်း, Ko Ye Music Production
၇ စကားလုံးမရှိတဲ့ ကောင်းကင် ၁၉၉၅ (ဖေဖော်ဝါရီ) Oasis Emperor နှင်းဆီလှိုင်း တေးထုတ်လုပ်ရေး
၈ ထူးအိမ်သင် (Unplugged Live) (23-2-1995 One man show at Aung San Stadium) ၁၉၉၆ (ဒီဇင်ဘာ) Oasis Iron Cross Sein Min Music Production
၉ မြို့ပြလရောင်တမ်းချင်း ၁၉၉၆ (အောက်တိုဘာ) May Session Players Mercury Recording
၁ဝ ဝင်ရိုးစွန်းမီး ၁၉၉၇ (ဖေဖော်ဝါရီ) LYNN Session Players NASA Recording
၁၁ အမေ (သို့) အွ့ကင်းမဲ့ မေတ္တာတော် သီချင်း ၁၉၉၇ (မေ) LYNN Iron Cross IC Music Production
၁၂ အမှတ်တရ ဒဏ်ရာသီချင်းများ ၁၉၉၉ (ဇွန်) Oasis Emperor Emperor Heart Music Production
၁၃ အစိမ်းရောင် ရက်စွဲများ ၂ဝဝ၁ (နိုဝင်ဘာ) Oasis Iron Cross စံပယ်ဦး တေးသံသွင်း
၁၄ တနေ့စာအလွဲများ ၂ဝဝ၃ (အောက်တိုဘာ) Oasis Emperor မန်းသီရိ တေးသံသွင်း
၁၅ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ၂ဝဝ၅ (သြဂုတ်) Oasis, PTL, Nawarat Iron Cross, The Trees, Session Players CMP Music Production
၁၆ သီချင်းခွေကြမ်း - - - -
မြန်မာ့ သတင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့။
နည်းပညာနှင့် မြန်မာ့ ကွန်ရက် မော်ကွန်းတိုက်။
စာပေ၊ သတင်းနည်းပညာနှင့် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံတော်။